Maxaad Ugu Baahan Tahay Inaad Ku Maalgashato Fiidiyowyada Wax Soo Saarka Boggaaga Ecommerce | Martech Zone
Fiidiyowyada waxsoosaarka waxay bixiyaan dukaamada elektaroonigga ah qaab hal abuur leh oo ay ku muujinayaan wax soo saarkooda iyagoo sidoo kale u oggolaanaya macaamiisha fursad ay ku arkaan alaabada ficil ahaan. Marka la gaaro 2021, waxaa lagu qiyaasay in 82% dhammaan taraafikada internetka ay ka koobnaan doonaan isticmaalka fiidiyowga. Hal dariiqo oo ganacsiga eCommerce ay uga hor mari karaan tan waa iyada oo la abuuro fiidiyowyo wax soo saar ah.
Istaatistikada Dhiirrigelisa Fiidiyowyada Wax Soo Saarka ee Goobtaada Ganacsi:
88% milkiilayaasha meheradaha ayaa sheegay in fiidiyowyada wax soo saarka ay kordhiyeen qiimaha beddelaadda
Fiidiyowyada alaabada ayaa soo saaray 69% celcelis ahaan cabirka dalabka
81% waqti dheeri ah ayaa lagu qaataa goobaha ay ku jiraan fiidiyow la daawado
Fiidiyowyada alaabada ayaa abuuray 127% kordhinta booqashooyinka bogagga iyaga lahaa
Sawir gacmeedkan, Maxaad Ugu Baahan Tahay Inaad Maalgashato Fiidiyowyada Wax Soo Saarka Maanta, wuxuu qeexayaa faa'iidooyinka fiidiyowyada wax soo saarka ee tafaariiqleyda khadka tooska ah waxayna bixisaa toban talooyin oo sare oo kugu hagi doona adiga habka loo marayo sameynta fiidiyowga wax soo saarka:
Qorshee istiraatiijiyaddaada sameynta, kobcinta, iyo cabirka saameynta fiidiyowyada sheygaaga.
Ku bilow wax yar adigoo abuuraya xulasho fiidiyowyo ah alaabada ugu iibinta badan.
Hayso fiidiyowyadaada fudud si loo kordhiyo rafcaanka dhagaystayaasha si ballaaran u kala duwan.
Hayso fiidiyowyadaada gaaban iyo barta.
Ku hagaaji boggagaaga si fiidiyowyadu ugu ciyaaraan qalab mobile.
Tus alaabta la isticmaalo si loo siiyo dareen wanaagsan oo taabashada iyo dareenka shayga ah.
Ku hagaaji fiidiyowyadaada daabacaad ahaan asal ahaan baraha bulshada.
Ku dar a wac talaabo ku dhiirrigelinta daawadayaasha inay iibsadaan.
Adeegso fiidiyow qoraalada ama subtitles si loo daawado marka dhawaqa la damiyo.
Ku dhiirigeli Macmiilka la soo saaray macaamiisha dhabta ah ee alaabta iibsatay.
Hubso inaad aqriso maqaalkeena kale iyo faahfaahinta ku saabsan noocyada fiidiyowyada wax soo saarka waad soo saari kartaa. Waa tan faahfaahinta buuxda:
Tags: fiidiyowyada wax soo saarka ugu iibinta badanwac talaabofiidiyowyada e-commercefiidiyowyada e-commerceinfographicfiidiyowyada wax soo saarka moobiilkamid wax soo saardhererka muuqaalka sheygaistaraatiijiyada fiidiyowga sheygafiidiyowyada wax soo saarkafiidiyowyada wax soo saarka warbaahinta bulshadafiidiyow ugcwaxyaabaha ka kooban isticmaaleQoraallo Video ahsubtitles videovideos
Wadaagista kuma filna - Maxaad ugu Baahan Tahay Istaraatiijiyad Kordhinta Mawduuca